एमाले कार्यदलको बैठक जारी रहेका बेला नेपाललाई भेट्न एकाएक कोटेश्वर पुगे प्रचण्ड Nepalpatra एमाले कार्यदलको बैठक जारी रहेका बेला नेपाललाई भेट्न एकाएक कोटेश्वर पुगे प्रचण्ड
एमाले कार्यदलको बैठक जारी रहेका बेला नेपाललाई भेट्न एकाएक कोटेश्वर पुगे प्रचण्ड
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका दुई समुहहरुको प्रतिनिधित्व गरेका केपी शर्मा ओली समूह र माधव नेपाल समूह मिल्ने शुभ संकेत देखेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई तनाव सिर्जना भएको छ ।
स्रोतका अनुसार नेपाल निवासमा २ बजेदेखि प्रचण्ड र नेपालबीच भेटवार्ता भएको हो । नेकपा एमालेमा एकता कायम गर्न बनेको कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा जारी रहेको बेला जनकपुरबाट काठमाडौं फर्किएपछि सीधै प्रचण्ड नेपाललाई भेट्न एकाएक कोटेश्वर पुग्नुलाई एमालेको ओली समूहले अर्थपूर्ण रुपमा लिएको छ ।
यसअघि पार्टीमा समानान्तर कमिटीको अभ्यासको अनुभव लिएर जसरी भएपनि ओलीसँग सम्वन्धविच्छेद गरेर नयाँ कम्युनिष्ट पार्टीको सपना देखेका नेपाललाई एमालेको एकता जोगाउन गठित कार्यदलका सदस्यले भेटेर बल्ल-बल्ल मनाएर सहमति नजिक पुगेको बेला नेपाललाई फेरि भड्काउन प्रचण्ड उनको निवास कोटेश्वर त पुगेका होइनन् भन्ने आशंका ओली समूहका नेता-कार्यकर्तामा छाएको छ ।
कार्यदलको आजको बैठकमा विवाद समाधानका लागि दुबै पक्षबीच गम्भीर छलफल हुने बुझिएको छ । अव दुवै पक्षले अदालतको फैसला मानेर पार्टीले संस्थागत निर्णय गरेर अघि बढ्ने सहमति दुवै पक्षबीच भएको छ ।
कार्यदलका संयोजक रावललाई १२ जेठमा अध्यक्ष ओलीले निष्कासन गर्ने निर्णय गरेपछि कार्यदल निष्क्रिय भएको थियो । एमालेको विवाद समाधानका लागि पुनः सक्रिय भएको कार्यदलले एकताको प्रक्रिया नयाँ ढंगले शुरुवात गरेको हो ।
पार्टीका शीर्ष र दोस्रो तहका नेताबीच भएको अनौपचारिक छलफललाई व्यवस्थित रुपमा सहमतिमा रुपान्तरणका लागि कार्यदलको बैठक हिजो बसेको हो । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २०७५ जेठ ३ गते अगाडिको साङ्गठनिक स्थितिका आधारमा सञ्चालन गर्न तयार भएपछि सहमतिको वातावरण बनेको हो ।
सिंहदरबारमा हिजो बसेको बैठकले हालसम्मका अनौपचारिक छलफल पुनरावलोकन गरेको र पार्टीभित्रै बसेर आन्तरिक समस्या समाधान गर्ने कुरा भएको एमालेका सचिव गोकर्णराज विष्टले जानकारी दिए । साथै,कार्यदलका सदस्यहरूबीच विवाद समाधानका लागि नयाँ शिराबाट अघि बढ्ने सहमति पनि भएको थियो ।
यसअघि प्रचण्ड र नेपाल मिलेर संयुक्त नयाँ कम्युनिष्ट पार्टीको परिकल्पना समेत गरेका थिए । माधव नेपालनिकट युवा नेता जीवन राईको नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा पार्टीको चुनाव चिन्ह कलम रहेको नेकपा एकीकृत दर्ता भई सकेको छ ।
नेपालसँग नमिल्ने हो भने आगामी निर्वाचनमा प्रचण्डको पार्टीको अवस्था कम्जोर हुने निश्चित देखिन्छ । नेपालसहितको नयाँ पार्टी बनाएर अघि बढ्नु प्रचण्डको बाध्यता जस्तै रहेको छ । माओवादी केन्द्रका २ दर्जन भन्दा बढी नेताहरु प्रचण्डलाई छोडेर ओलीको एमालेमा प्रवेश गरिसकेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गरेको कारबाहीको वैधतामाथि प्रश्न उठाउदै पूर्वमाओवादीका ४ नेताहरुले सर्वोच्च अदालत जाने जाने तयारी गरेसंगै प्रचण्डका दु:खका दिन शुरु हुने संकेत देखिएको छ ।
२०६९ सालमा हेटौंडा महाधिवेशन भए यता माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन समेत हुन सकेको छैन । अवैध पार्टीको अवैधानिक अध्यक्षले कारबाही गरेको पनि अवैधानिक रहेको पनि उनले बताएका थिए । उनका अनुसार ५ वर्षमा महाधिवेशन नगर्ने पार्टी कसरी माओवादी हुन्छ ? भनेर प्रश्न समेत गरेका थिए ।
अध्यक्षको हैसियत भएकाले मात्र अन्य सदस्यलाई पदबाट हटाउनले सक्ने उनले बताएका थिए । यद्यपि, ५ वर्षपछि अध्यक्षबाट स्वतः पदमुक्त हुने प्रावधन रहेपनि अहिलेसम्म अध्यक्षै भइरहनुलाई उनले अवैध भनेका थिए । पूर्वमन्त्री साहले निर्वाचन आयोगलाई ९ वर्षसम्म पनि पार्टीको महाधिवेशन नगर्ने पार्टी अध्यक्ष र पार्टी कसरी वैधानिक भयो ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले पार्टीको महाधिवेशन नगरी चलेकाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उक्त पार्टीको वैधानिकतावारे प्रश्नचिन्ह उठाएका थिए ।
उनले निर्वाचन आयाेग, प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रकाे अविलम्ब ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने बताएका थिए । उनले २०७५ जेठ ३ गते यताकाे ३ बर्ष शून्य अवधि र थप समय पाउँदा पनि ६ महिनायता प्रचण्ड स्वयं अवैध भइसकेछन् भन्दै अनि राष्ट्रपति भन्दा उनलाई राजा मन नपराेस् त ? भनेर कटाक्ष समेत गरेका थिए ।
नेकपा एमालेको आन्तरिक विवाद मिलाएर एकता जोगाउन गठित १० सदस्यीय कार्यदलको बैठक आज मंगलबार पनि सिंहदरबारमा जारी रहेको छ । पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधान गर्न दुवै समूह सहमत भएपछि एमालेमा आशाको दियो बल्न शुरु भएको बेला एकता अभियान कतै फेरि तुहिने त होइन भन्ने आशंका पैदा भएको छ ।
शुरु हुँदै प्रचण्डका दु:खका दिन : सर्वोच्च जाने तयारीमा पूर्वमाओवादीका ४ नेताहरु
एमालेमा आशाको दियो बल्दै : एकता जोगाउन कार्यदलको बैठक जारी